EO firy ny tanindrazana azonao atao
avy amin'ny mpanoratra: Max Csern 9 Mey 2021
Firy ny zom-pirenena avela any Russia no fehezin'ny andininy faha-62 amin'ny lalàm-panorenan'ny Federasiona Rosiana. Ny lalàna fototra dia tsy mandrara ny zom-pirenena maro. Tsy misy fehezanteny mifandraika amin'izany amin'ny fitsarana.
EO firy ny fananana olom-pirenena?
Ny lalàna ao amin'ny federasiona rosiana dia tsy mametra ny olom-pireneny amin'ny isan'ny zom-pirenena azo. Any Okraina, misy ny fandrarana amin'ny pasipaoro faharoa, saingy misy fomba hanodinana azy ireo. Any Kazakhstan, voafehy mafy kokoa io faritra io.
EO firy ny tanindrazana no mahazo alalana any RUSSIA?
Firy ny zom-pirenena avela any Russia no fehezin'ny andininy faha-62 amin'ny lalàm-panorenan'ny Federasiona Rosiana. Ny lalàna fototra dia tsy mandrara ny zom-pirenena maro. Tsy misy fehezanteny mifandraika amin'izany ao amin'ny jurisprudence. Manana fahalalahana misafidy tanteraka ny Rosiana. Firy ny zom-pirenen'ny olona iray, manapa-kevitra samirery ny tsirairay, miankina amin'ny filany sy ny filany avy. Ny hany takiana amin'ny fanjakana dia ny mitatitra ny satan'ny vaovao amin'ny serivisy fifindra-monina tsy tokony hihoatra ny 60 andro aty aoriana.
EO firy ny tanindrazana any UKRAINE azonao atao?
Ny valin'ny fanontaniana hoe firy ny zom-pirenena azon'ny olona iray ao Okraina dia tsy mitombina sy tsy mazava be - iray, Okrainiana. Voararan'ny lalàm-panjakana ny zom-pirenena marobe.
Saingy eto amin'ity firenena ity, firy ny zom-pirenena azonao atao, manapa-kevitra samirery ny tsirairay. Saika tsy azo atao ny manasazy ireo mpandika lalàna noho ny tsy fisian'ny fomba fanao.
Na azo atao ny manana pasipaoro 2 na zom-pirenena telo aza - miankina amin'ny fahaizan'ilay olona daholo izany. Inona moa fa tsy ny firenena rehetra no voatery mampahafantatra an'i Okraina fa nahazo pasipaoro hafa ny teratany.
Mijanona amin'ny fandinihana amin'ny antsipiriany ny karazana zom-pirenena, ary hampiasa ireo fotoana vaovao nisokatra.
AZONAO AZONAO ve ny manana CITIZENSHIP ROA ao KAZAKHSTAN?
Firy ny zom-pirenena azonao atao ao Kazakhstan no napetraky ny Lalàm-panorenana, ny andininy faha-10 amin'ny lalàna fototra. Manan-jo handoa onitra sy hody an-trano ny mpandika lalàna. Raha manana zom-pirenen'i Kazakhstan ianao dia tokony hodinihina sy holanjaina ny fanapahan-kevitrao hahazoana zom-pirenena.
AAAA ADVISER dia hanampy anao ho lasa mpandray anjara amin'ny tetikasa fampiasam-bola any amin'ny firenena liana amin'ny fidiran'ny olona mahaleo tena ara-bola. AAAA ADVISER dia mpandraharaha manana fahazoan-dàlana ho an'ny zom-pirenena ofisialy mifototra amin'ny fampiasam-bola ataon'ny mpifindra monina. Eto ianao dia hahazo fanampiana sy torohevitra manam-pahaizana momba ny olana rehetra amin'ny fahazoana fahazoan-dàlana hipetraka na Citizenship amin'ny fampiasam-bola.
Mifandraisa amin'ny manam-pahaizana anay dia hasehonay anao ny safidy rehetra hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka, trano maharitra ary zom-pirenena faharoa +79100007020
Tsidiho ny tranokalanay: VNZ.SU
↑ firy ny zom-pirenena azonao atao ↑ firy ny zom-pirenena avela ↑ firy ny zom-pirenena avela any Russia ↑ firy ny zom-pirenena avela any Ukraine ↑ firy ny zom-pirenena avela any Kazakhstan ↑ Zom-pirenenan'i Russia ↑ Zom-pirenenan'i Okraina ↑ Zom-pirenena roa Kazakhstan ↑ Rosia mizaka ny zom-pirenena faharoa ↑ Zom-pirenen'i Okraina faharoa ↑ Olom-pirenena faharoa Kazakhstan ↑ mahazo zom-pirenena roa ↑ mahazo zom-pirenena faharoa ↑ fandoavana zom-pirenena roa ↑ onitra ny zom-pirenena faharoa ↑
Miverina amin'ny News